राना थारू र कठरिया थारू हरुको प्रमुख पर्व – होरी (By Abinash Chaudhary) – Tharu Community
राना थारू र कठरिया थारू हरुको प्रमुख पर्व – होरी (By Abinash Chaudhary)
By Tharu Community	 March 17, 2014 Leaveacomment
पश्चिम तराईवासी राना र कठरिया थारू समुदायमा होरी (होलि) पर्वको रौनक बढेको छ. फाल्गुन २ गते पूर्णिमाका दिन गाउँका अगुवा (भलमन्सा) ले होरी बनाएर राखेपछि कैलाली, कन्चनपुरमा बसोबास गर्ने राना थारु समुदायमा होरी पर्वको रौनक छाएको हो. यहाँ बसोबास गर्ने कठरिया थारू समुदायमा पनि होरी पर्वको रौनकताले छोइसकेको छ. राना र कठरिया थारु समुदायका युवा होरी नृत्य गर्न ब्यस्त भएका छन. होरी पर्व शुरु भएको झन्डै एक महिना सम्म राना र कठरिया थारुले नाचगान गरेर होरी पर्व मनाउने चलन छ. यो दुवै समुदायको सब भन्दा ठुलो पर्व हो.
राना थारुका युवकयुवक्तिले रातिको समयमा होरी नाचगान गरेर पर्व मान्ने चलन छ. यसलाई उनीहरु आफ्नो भाषामा ‘जिन्दा होरी’ (जिउँदो होलि) भन्ने गर्दछन. हिंडा होरी चोर दहन नभएसम्म खेलिने गरेको श्रीमती जीवन रानाले जानकारी दिनु भयो. राना थारूले होरी पर्व शुरु भएको पहिलो दिन देखि एक महिनासम्म आफ्नै समुदायको हरेक घरबाट गुईंठा र तोरीको सुकेको डांठ चोरेर गाउँभन्दा खुला क्षेत्रमा थुपार्ने गर्दछन. चोरेको गुईंठा र तोरीको डांठ थुपारेर होलिका बनाइ चोर दहन गर्ने चलन समुदायमा छ.
चोर दहन पछि भोलिपल्ट मुर्दा होरी (मरेको होलि) शुरु हुन्छ. ओअस दिनलाई राना थारूले टिका भन्ने गर्छन. यहि दिन उनीहरु बिहानदेखि दिउँसो २ बजेसम्म एक अर्कालाई अबिर लगाउंदै होलि खेल्ने गर्छन. राना थारु समुदायले झन्डै एक महिना आठ दिनसम्म होरी पर्व मनाउँछन. यस बर्ष चैत १० गते खाक्रौरा (फुटेको गाग्रो फुटाउने) गरेर होरी नाच बन्द गर्ने र १७ गते चारै गरेर बिसर्जन गरेपछि विधिवत रूपले होरी पर्व समापन हुने जानकारी श्रीमती रानाले दिनुभयो.
होरी पर्वको राना थारू समुदायमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रहेको छ. दैत्य हिरण्यकश्यपले शक्ति दुरुपयोग गरेर आफ्नै छोरा प्रल्हादलाई मार्न खोज्दा सत्यको जीत भएको र असत्यको पक्षमा रहेको हिरण्यकश्यपकि बहिनि होलिका आगोमा भस्म भएको सम्झनामा राना थारूले होरी पर्व मनाउँछन. यो पर्वका बेला नराम्रो त्यागेर राम्रू चीज तथा विचारधारा अंगाल्ने जनविश्वाससमेत रहेको संस्कृतिका जानकार रानाको भनाइ छ. उहाँले साली नाता पर्नेले आफ्नो भिनाजु वा नजिकका मित्रलाई निम्तो गरेर मिठो मसिनो खुवाउने र भिनाजु तथा मित्रले आफ्नो गच्छे अनुसार डां वा शृंगारका समान दिने चलनले आपसी सद्भाव तथा सम्बन्ध बढाउने गरेको बताउनु भयो. सालीले निम्तो गरेर खुवाउने र भिनाजुले दान दक्षिणा दिने चलनलाई फगहा दिएको भन्ने गरिन्छ.
उता कठरिया थारू समुदायमा पनि चोर दहनसम्म होरी नाचगान धुमधामसंग हुने गरेको बताइन्छ. कठरिया थारूका युवापुस्ता घर-घरमा गैर होरी नाच नाचिरहेका छन. कठरिया समुदायमा होरी नाच पुष महिनाको वैवाहिक कार्यक्रमबाटै शुरु हुने गरे पनि अहिलेका पुस्ताले बिस्तारै यस्तो संस्कार त्याग्दै गएकाले एक महिनासम्म मात्रै होरी मनाउने गरिएको छ.
समुदायमा चार प्रकारको होरी हुने गरेको नेपाल कठरिया थारु समाजका महासचिव सन्तोष कठरियाले जानकारी दिनुभयो. उहाँका अनुसार ठर्मा होरी (पुरुष महिला सहभागी हुने), बन्ना होरी (पाका पुरुषमात्रै सहभागी हुने), मिच्चा होरी (महिला मात्रै सहभागी रहने) र एकल होरी (आधुनिकतामा आधारित) कठरिया थारू समुदायले मनाउँछन. होरी दुवै समुदायको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो.. यो पर्व बर्षदिनभरिका दु:ख बिर्सेर रमाउने, आफन्तसंग भेटघाट गर्ने र मिठो मिस्थान खाने गरेको सम्भंदित समुदायले बताउँछन.
Hori, Kathariya Tharu, Rana Holi, Rana Hori, Rana Tharu, Tharu Festival, Tharu Holi
← Previous post: भर्चुअल दुनियाँका सेलिबि्रटी – शिवानी सिंह थारू
#Khaja_Time yummy ghonghi, do you like it??Next post: →